Annaga nagu saabsan - Wuxi Hai Roll Fone Science&Technology Co., Ltd.
KU SAABSAN HRF
4 badeecooyin patented iyo 3 alaab tignoolajiyadeed sare leh
Wuxi Hail Roll Fone Science&Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2011, diiradda saaraya R&D iyo soo saarista waji-xidhka.Shirkaddayadu waxay leedahay 30-50 injineer, kuwaas oo rakibi kara oo tababari kara macaamiisha.Waxaan ku uruursanay khibrad qani ah oo ku saabsan goobtan.Alaabadayada waxaa laga iibiyay in ka badan 50 waddan iyo gobollo waxayna ku guuleysteen ammaan ballaaran oo macaamiisha ah.
Shirkaddayadu waxay ku takhasustay nakhshadeynta, wax soo saarka, iibinta, iyo adeegyada ka dib ee goobta mashiinka maaskaro, mishiinka tuubada alxanka leh, mishiinka goynta, gooyn khadka dhererka iyo mashiinka samaynta fiilada toosan oo buuxa, mashiinka samaynta rack supermarket, mishiinka samaynta taraabka wadida. , mashiinka samaynta qoraxda strut.Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale soo saari karnaa dhammaan noocyada gariiradda birta mashiinnada jeexjeexyada, simaynta gariiradda, iyo mashiinada goynta.
Waxaan diyaar u nahay inaan xiriir ganacsi la sameyno macaamiisha dibadda, waxaana sidoo kale rumeysannahay "fursadda halkan, halkan ayaad joogtaa".
Wuxi Hail Roll Fone Science&Technology Co., Ltd. oo leh in ka badan 11 sano oo taariikh wax soo saar ah, gudaha warshadaha.Qalabkeenu wuxuu ku guuleystey qaar badan, oo ay ku jiraan 4 badeecooyin la aqoonsan yahay iyo 3 alaab oo tignoolajiyadeed sare ah.Shirkaddayadu waa qaybta iibsashada qalabka ee la doorbido ee ganacsiyada waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee gudaha iyo dibaddaba.
Shahaadada mashiinka maaskaro
Roll samaynta mashiinka shahaado CE
Mashiinka goynta shahaado CE